साहित्य सृजना कसरी गर्ने ? - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
कती पटक पढियो : 1,415
4 Responses to साहित्य सृजना कसरी गर्ने ?
छिरिङ शेर्पा says:
वसन्त बोगटी says:
शहित्य बिधामा विशेष गरि नाटक लेख्न धेरै प्रयास गरे तर लेख्ने idea नपायर अलमल्ल परियो।।।।तेसैले केही तरिकाहरु सिकाइ दिन मिल्छ होला।
धन्यवाद छ हजुर लाई तपाईं ले लेख्नु सिकाउनु भएको मा
meghnath ale magar says:
मलाई साहित्य लेख्न नआए पनि यसमा रामाउन,पढ्न अति मन लाग्छ।
कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा थाहा छैन,यस्को बारेमा जानकार दिलाइदिनुभए म धेरै आभारी हुनेथिए।
नेपाली काव्य (7,404)
नेपाली गद्य (3,852)
नेपाली कथा (2,583)
स्‍मृति साहित्य (369)
नेपाली लघु उपन्यास : बारवालीको डायरी
कविता : लिम्वुवान
कविता : बेपत्ता
व्यङ्ग्य निबन्ध : सुब्बिनी बज्यै
कविता : एक टूक्रा घाम
कविता : सिता वाणी
भण्डार कोठा Select Month December 2017 (86) November 2017 (314) October 2017 (318) September 2017 (327) August 2017 (348) July 2017 (447) June 2017 (355) May 2017 (380) April 2017 (254) March 2017 (303) February 2017 (260) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (138) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)